Font Problem — MYSTERY ZILLION
ကျနော်laptop မှာ ဘယ် setting ,ဘယ်properties,ကိုဘဲဝင်ဝင် fonts style တွေက မမြင်ရလောက်အောင် သေးသေးလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်၊ Icon နဲ့ကျန်တဲ့နေရာက fonts style တွေကပုံမှန်ပါပဲ window ထဲမှာရှိတဲ့ fonts စာလုံးတွေ အားလုံးပြောင်းနေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး software install လုပ်တဲ့အခါ eg(ok,cancel,next ) တိုလိုစာတွေလဲပြောင်းနေပါတယ် Gtalk မှာဆိုရင်လည်း username ,password ,remember password တွေက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သေးသေးလေးဖြစ်နေပါတယ်၊Gtalk မှာ password ရိုက်တဲ့အခါ ****** တွေမဟုတ်ဘဲ အတုံးသေးသေး တွေဖြစ်နေပါတယ် ။ ကူညီပေးကြပါနော် laptop အမျိုးအစားက Acer window764bit ပါ
Call Personalize. Choose <strong>Windows Color</strong> at the bottom of Personalize Windows. Then, click Advanced appearance settings...
Check fonts size for all windows. ^^
အခုလိုကူညီပေးတာကျေးဇူတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေသေးဘူးအကို၊ပြဿနာအစက ကျနော်စက်ရဲ့ winbow ကို zawgyi one ကနေ myanmar3ပြောင်းသုံးတယ် fonts တွေကို install လုပ်တယ် fonts style တွေကို ကလိရာကနေ ဖြစ်တာပါပဲ အကိုပြောသလို Advance appearance settings... မှာတခုချင်းဆီ ကျနော် လိုက်လုပ်ပါတယ် အဆင်မပြေသေးဘူးအကို၊ ကျနော်လုပ်တာလိုနေတယ် ဆိုတာသိပါတယ်၊နောက်ထက်နည်လမ်းလေးများရှိသေးရင်ပြောပြပေးပါဦးနော်။ ကျေးဇူတင်ပါတယ်
ကျွန်တော့ site ကို wordpress သုံးပြီး တင်ထားတယ် ကျွန်တော် http://mywebfont.appspot.com/ က code တွေကို သုံးပြီး ကျွန်တော့ site မှာ myanmar3 embedded လုပ်ထားပါတယ် css မှာလည်း http://mywebfont.appspot.com/ က code အတိုင်းပဲ ထည့်ထားပါတယ် ကျွန်တော့ site ဟာ Mac OS ရဲ့ Mozilla နဲ့ Chrome တွေမှာ ကောင်းကောင်းမပေါ်ပါဘူး Safari ကြတော့ ကောင်းကောင်းပေါ်ပါတယ် Windows တွေအတွက်တော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ. အဲ့ဒါ Mac ရဲ့ Mozilla တို့ Chrome တို့မှာ myanmar3 အလုပ်မလုပ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါသလားခင်ဗျာ. ဒီပြဿနာလေး ဖြေကြားပေးပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ